Tady vaovao Apple Watch, mihazakazaha adala! | Avy amin'ny mac aho
Tady vaovao Apple Watch, mihazakazaka adala!
Taorian'ny antsasak'adiny voalohany an'ny Keynote izay niresahan'izy ireo momba ny lafiny mifandraika amin'ny fitsaboana sy ny fanodinana ary ny tontolo iainana dia nanome lalana ny vaovao ho an'ny Apple Watch Nifantoka manokana tamin'ny loko sy modely vaovao izy ireo.
Ny loko vaovao dia natolotra tao amin'ny fehikibo fluoroelastomer, izay ahafahantsika manasongadina ny mavo, ny loko mainty amin'ny Milanese, loko vaovao ho an'ny hoditra ary fanombohana fehin-kibo nylon amin'ny loko samihafa.
Ny lokon'ny kintana amin'ireo fehikibo vaovao dia mavo ary nipoitra tamin'ny fehin-kibo fluoroelastomer, ny fehikibo hoditra misy fehin-kibo maoderina ary ny fehikibo hoditra misy fehin-kibo mahazatra. Etsy an-danin'izany, manana ny Loop Milanese vaovao misy loko mainty sy misy tadiny.
Izy io dia famolavolana fehin-kibo tena tsara ho an'ny Apple Watch ary ny fehin-kiran'ny nylon voadidy hifanaraka amin'ny boaty misy antsika Apple Watch dia azontsika atao ny mitafy alimina Apple Watch miaraka amina fehin-kibo, na akanjo na fanatanjahan-tena.
Mikasika ny vidin'izy ireo dia afaka milaza aminao izahay fa ireo efa nisy dia mitazona ny vidiny raha ny vaovao kosa Ny fehin-kibo nylon vita amin'ny kofehy dia 59 €. Efa misy ao amin'ny Malagasy an-tserasera avy any Apple hovidiana ary hijerena ireo maodely isan-karazany izay misy izao.
Raha mbola tsy manana Apple Watch ianao dia ampahafantarinay anao fa nanolotra modely sasany ho anao i Apple Ny loko vaovao sy ny maodelin'ny fehy dia efa ao anaty boaty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Tady vaovao Apple Watch, mihazakazaka adala!
WatchOS 2.2 dia misy amin'ny kinova farany
Apple dia namoaka ny OS X 10.11.4